ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာကိုရိုလာများ | တိုယိုတာကိုရိုလာကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
White Toyota Corolla 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Corolla 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Corolla Fielder 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေ...
Silver Toyota Corolla X 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Pearl White Toyota Corolla Fielder 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေ...
White Toyota Corolla X 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
White Toyota Corolla 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
White Toyota Corolla 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတ...
Lks 231 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Corolla Axio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
Lks 264 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Corolla Axio 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
White Toyota Corolla 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Pearl White Toyota Corolla 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Corolla 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
White Toyota Corolla Assista 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Toyota Corolla Axio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
White Toyota Corolla Axio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Silver Toyota Corolla Axio 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Corolla Fielder 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,A...
Pearl White Toyota Corolla 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Silver Toyota Corolla Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 267 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Corolla 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
ပြည်တွင်း အကြမ်းခံမှုမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ဗန်ကား ကိုရိုလာ
တိုယိုတာက ဌင်းရဲ့ ကိုရိုလာ စီးရီးမှာ အမျိုးအစား သုံးမျိုးထုတ်ပါတယ်။ ဆီဒန်၊ ဟတ်ဘတ်နဲ့ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်လို့ခေါ်တဲ့ ဗန်ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုလာ ဗန်ကားများဟာ ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရများ ကားတွေ အဖြစ် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ကိုရိုလာဗန်တွေဟာ ၀ဘ်ဂွန်တွေရဲ့ ကိုယ်ထည်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ နောက်ခန်း ပစ္စည်းတင်ရာမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အောက်က လေးတိုက် ကားတွေ ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကားဒရိုင်ဘာတွေ ရဲ့ အကြိုက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကိုရိုလာကားတွေဟာ နောက်ဘီးဖက်မှာ အနည်းငယ်မြင့်မားပြီး ကိုယ်ထည်ကို အဖြူရောင်မှာ အများဆုံးတွေ့ရပါမယ်။ တစ်ခြား ဆီဒန်ကားနဲ့ အမျိုးအစားများ အနေနဲ့ Corolla Axio, Corolla Fielder, Corolla Rumion တို့ကိုတွေ့နိင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထား အရုကိုရိုလာ ဗန်ကားဟာ အကြမ်းခံ ခြင်း အင်ဂျင်ပါဝါ ဆီစား သက်သာခြင်း တို့ကြောင့် မြန်မာပြည် ရဲ့ အဌားကား တက္ကစီ ၀န်ဆောင်မူတွင် အတွေ့ရများပါတယ်။ ဒီအတွက်
ကားမောင်းသမား၊ တက္ကစီသမားတို့ရဲ့ ပါးစပ်ဖျားတွေ ရေပန်းစားချက်ရှိကာ ကိုရိုလာမှ ကိုရိုလာဖြစ်နေပါတယ်။ ထိုကြောင့် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားတို့ဖြစ် တက္ကစီထောင်မည့်သူတို့မှာ ကားအရောင်းတွေဆီကိုသွားကာ ဂျပန်လေလံမှ တိုက်ရိုက်ဆွဲခြင်းမှဌင်း၊ ပြည်တွင်းရောက်ပြီးသားကိုမှ စကားပြောဆိုကာ ၀ယ်ယူကြခြင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဓိက ကြိုက်ရခြင်းအကြောင်းက ၀န်များကို ပိုတင်ခံနိင်သောလေးမှ Corolla Van ( အခေါ် ဖင်ကောက်) တွင်ပါရှိသောကြောင်းဟု သိရပါတယ်။ ကျန်သော Corolla နာမည်ရှေ့ခံဖြစ်သော Corolla Fielder တို့မှာ ကွိုင်နဲ့ ဖြစ်သောကြောင့် ဟုဆိုကာ မြန်မာ ရှေး ကားဒရိုက်ဘာများရဲ့ စကားလုံးနောက်တွင် ဇိမ်ခံကား အချော တစ်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရိုလာ ဗန်ကားများဟာ မော်ဒယ် ကွဲတွေကို မှုတည်ပြီး အင်ဂျင် စီစီလည်း ကွဲပါတယ်။ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၂၀၀ စီစီတို့ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၂၀၀ စီစီထဲမှာ လေးဘီမောင်းစနစ် ၊ဒီဇယ် ဗန်ကားတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၁၅၀၀ စီစီကတော့ မြင်းကောင်ရေ ၁၀၀ ကျော် ထွက်ရှိပါတယ်။ တိုယိုတာ စပီအို ရဲ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၆၀၀ စီစီ နဲ့ ၁၈၀၀ စီစီတို့ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၀ စီစီကတော့ ဒီဇယ် အင်ဂျင် ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ကိုရိုလာတွေကတော့ ဗန်ကား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ နောက်ခန်းနေရာနဲ့ လူစီးထိုင်ခုံတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အနောက်ဖက်က နောက်ဖုံးကတော့ အနည်းငယ်ကောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အတွင်းခန်းကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ သေးသွယ် ပေါ့ပါးတဲ့ အသွင်ကို ဆောင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ စပယ်စီအိုကတော့ တိုယိုတာ ကယ်ဒီနား စက်ရုပ်တွေနဲ့ ကားကိုယ်ထည်ပုံစံ ဆင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ သူကမားတီးပါပို့စ် ဗန်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ကနောက်ဆုံး ၂၀၀၉ ထိပဲ ထုတ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ အိတ်ချိအိုကိုလည်း ကိုရိုလာ ဆလွန်ကားတွေရဲ့ ဆန်းသစ်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်း မျက်နှာကို ပြောင်းလဲ မြင့်တင်ထားပြီး ကားမီးလုံးနဲ့ နှာပေါက်ကို တစ်တန်းတည်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ၊ဓာတ်ဆီ ၁၃၀၀ စီစီ ရနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး အနေနဲ့ ဟွန်ဒါ ဘရန်ထဲက ဟွန်ဒါ စီဗစ်တို့နဲ့ ဆင်ပါတယ်။
၀ယ်ယူရတဲ့ အကြောင်း အရာ ထင်ရှားမှု
တိုယိုတာ စပယ်စီအိုနဲ့ ကိုရိုလာ ဖီးဒါတို့ကတော့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အနေနဲ့ တော်တော်များများ ပါဝင်ထားပြီး ပါဝါ လော့ခ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုး၊ ပါဝါ စတီယာရင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုရိုလာ ဗန်မှာလည်း ဂရိတ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ပါဝင် ၀င်းဒိုး ပါရှိမှု ၊ မပါရှိမှုက ကွဲပါတယ်။ ကိုရိုလာ ဗန်ကားတွေဟာ အကြမ်းခံမှုကြောင့် ၀ယ်ယူကြပါတယ်။ တက္ကစီ အဌားယာဉ်တွေမှာ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုလာ စပယ်စီအိုတွေကိုတော့ ဆလွန်ကားတွေ အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၀၀ စီစီ ရနိုင်တဲ့ အတွက် သုံးလို့ အဆင်ပြေတဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုလာ၂၀၁၁ ဆီဒန်ထဲကဆိုလျှင် ၁၅၀၀စီစီကို မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း( ၁၆၀,) ၁၆၅ သိန်းဖြင့် ရရှိနိင်ပါတယ်။ ဒီလိုကားမျိုးဆိုလျှင်တော့ အင်ဂျင်ပါဝါ (၁၅၀၀) မောင်းနှင်ပြီသော ကီလိုမိုင် ၇သောင်းကျော်လောက် ဖြင့် ရရှိနိင်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကနေ ပြီး ကိုရိုလာ အမျိုးနွယ်တွေကို တွေ့နိုင်ပြီး စပယ်စီအိုတွေကတော့ ၂၀၀၉ လောက်ထိသာတွေ့ရပါမယ်။ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဗန်ကားတွေကတော့ ၁၂၀ ကျပ်သိန်းလောက်မှာ ရှိပြီး ၁၀၀ ကျပ်သိန်း အောက်မှာ လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုတွေနဲ့ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါတွေကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၇၀ လောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်း ရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုလာထဲမှာ ပြည်တွင်း အတွက် အိမ်စီးကား၊ အဌားကားတို့ကို ရနိုင်သကဲ့သို့ အင်ဂျင်တွေလည်း ၁၃၀၀ စီစီကနေ ၂၀၀၀ စီစီကျော်ထိ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗန်ကားတွေကို အကြမ်း အနေနဲ့ သုံးနိုင်သလို ဆလွန်ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ စပယ်စီအိုတို့လို ကားတွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ကိုရိုလာ စီးရီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။